Nyocha igwefoto Huawei P50 Pro, ọkwa ọhụrụ dị elu nke ika [DxOMark analysis] | Androidsis
Aaron Rivas | | Huawei, Nyocha
El Huawei P50 Pro Ọ bụ ugbu a ekwentị kacha dị elu nke ika ahụ, bụrụkwa otu n'ime ndị kachasị na ọkwa igwefoto, ihe DxOMark kwenyelarị n'otu nyocha ọhụụ.
Ma ọ bụ na Huawei P50 Pro ọhụrụ na -abịa na sistemụ foto n'azụ na -enwe mmasị na ya ihe mmetụta bụ isi nke 50 MP nwere oghere f / 1.8, oghere periscope 64 MP nwere oghere f / 3.5, akụkụ 8 MP sara mbara nwere oghere f / 2.2 na ihe mmetụta MP monochrome ikpeazụ 40 MP nwere oghere f / 1.6. Igwefoto selfie, maka nke ya, bụ 13 MP ma nwee oghere f / 2.4, mana n'okpuru anyị ga -enyocha modulu foto azụ yana nsonaazụ ọ nwere ike ịnye n'ọtụtụ ọnọdụ.
1 Nke ahụ bụ ka Huawei P50 Pro dị na ọkwa igwefoto
Nke ahụ bụ ka Huawei P50 Pro dị na ọkwa igwefoto
Emebela Huawei P50 Pro na ọkwa DxOMark dị ka mkpanaka nwere igwefoto kacha mma nke oge a, si otú a karịrị ike Xiaomi Mi 11 Ultra, nke nọ n'elu tebụl ihe fọrọ nke nta ka ọ pụta.
Ma ọ bụ ya igwefoto ekwentị a na -enye ọmarịcha onyoonyo n'ọnọdụ niile, ịbụ otu n'ime ndị a pụrụ ịtụkwasị obi iji weghara oge nwere oke nkọwa zuru oke. Ọ bụ nke ukwuu na nsonaazụ nke Huawei P50 Pro ọhụrụ na nnwale ndị ahụ mepere oghere n'etiti ndị kacha mma ruo taa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile, dịka ihe DxOMark siri nyochaa na webụsaịtị ya.
Otu akụkụ nke ama ama a na-arụ ọrụ nke ọma pụtara na ngalaba mbugharị (mbugharị), na-enweghị akara na-enweghị atụ nke ihe dị 107 isi, si otu a bụrụ otu kachasị mma na ngalaba a, na ekele niile maka njide ya. nwere ike iru na mbugharị ngwa anya na ngwakọ nke o nwere. Site na nke a, ọ nwere isi asaa karịa onye ndu gara aga na ụdị a, Xiaomi Mi 10 Ultra. Ajụjụ, ihe onyonyo a na-esite na igwefoto obosara sara mbara yana modul telephoto kacha mma DxOMark nwalere.
Ihe Huawei P50 Pro na -abụbeghị nọmba nọ na ngalaba vidiyo, opekata mpe na ọkwa DxOMark. Na ngalaba a, ekwentị ụlọ ọrụ China agbadala otu isi n'azụ Xiaomi Mi 11 Ultra, nke na-eme ọmarịcha nke ọma na ngalaba a, yabụ bụrụ nke kacha mma na ngalaba a, ihe na-abụkarị n'ihi na ọ na-eweta ọkwa dị ala. mkpọtụ na udidi na -apụta na ịkọwa na ọnọdụ ọkụ na obere ọkụ.
Foto ụbọchị Huawei P50 Pro | Isi mmalite: DxOMark
Bụlagodi, P50 Pro ka dịkwa oke mma na ndekọ vidiyo. N'ezie, otu mpaghara nkatọ bụ ihe onyonyo vidiyo, ebe a hụrụ ụfọdụ mmetụta na -achọghị dị ka ịma jijiji, ịkpa oke na nha nke agba, nsogbu atọ kacha pụta ìhè n'abalị na ọnọdụ ọkụ adịghị mma.
Ugbu a, na -abụkwaghị nkatọ, Huawei egosila ọzọ na ọ nwere ike na ọkwa foto na ekwentị, oge a na P50 Pro, flagship ọhụrụ ya. N'ụzọ dị otu a, onye nrụpụta China edobela ya ka ọ bụrụ akara kacha elu na ekwentị nke ndị ọzọ ga -eti ya n'ihe gbasara foto na vidiyo, ihe adịghị mfe ma ọlị.
Isi mmalite: DxOMark
Dabere na ihe DxOMark rụtụrụ aka na nyocha ha, ekwentị nwere ezigbo arụmọrụ n'ime ụlọ na onyonyo ebe ọkụ anaghị adịcha mma maka ezigbo foto. Ma ọ bụ na ngalaba a ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mma karịa asọmpi ahụ, ma maka iji igwefoto na aka ya na igwefoto etinyere na tripod, nke bụ mgbe ọ na -enweta nsonaazụ kacha mma ebe ọ bụ na ngwaọrụ anaghị emegharị emegharị. N'ezie, oke ike adịghị mma, mana ọ na -ejikọ maka ọnọdụ mbụ n'ọkwa.
Ihe ọzọ Huawei P50 Pro pụtakwara nke ọma dị n'ime ya nkọwa na mmeputakwa ụcha. Karịsịa n'ihe banyere itule ọcha, nke a nwere ike nwee njikọ chiri anya na iji ihe mmetụta multispectral, nke bụ monochrome 40 MP. N'otu oge ahụ, sistemụ akpaaka na -arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ ọkụ niile na ọkwa ọkụ niile, na -enweghị mkpọchi mkpọchi efu yana ezigbo nlebara anya na oghere. N'ozuzu, P50 Pro autofocus na -arụ ọrụ nke ọma, ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ na ogo.
Foto e sere na ọnọdụ bokeh na -egosi mwepụ nke isiokwu ahụ nke ọma na blur na -aga nke ọma. Enwere mperi ịdị omimi dị omimi gburugburu isiokwu dị n'ihu yana nkọwapụta ya dịkwa mma nke ukwuu, na-eme P50 Pro ka ọ bụrụ ọkwa kachasị ọhụrụ maka bokeh.
Huawei P50 Pro rụzuru ezigbo akara na ụdị abalị, ekele maka arụmọrụ pụtara ìhè na subtests niile. Ọbụlagodi mgbe ọkụ anaghị agba ọkụ maka eserese na ọnọdụ ọkụ akpaaka, onyonyo na -egosi ngosipụta dị mma yana oke ike. Ngosipụta ahụ adịghị mma na ihu isiokwu ahụ, kamakwa na ndabere. Mgbe ọkụ na -enwu (dị ka ọ dị na foto dị n'okpuru), nguzo ọcha na ụda akpụkpọ ahụ adịghị atọ ụtọ dịka ọ dị na Huawei Mate 40 Pro +, nke bụ ngwaọrụ kachasị mma na ụdị abalị.
Ogo vidiyo niile nke ngwaọrụ dabere na arụmọrụ ya yana nsonaazụ ọ na -enweta n'ọnọdụ dị iche iche. Huawei P50 Pro na -enweta akara vidiyo 116 na tebụl DxOMark, nke na -achịkọta na maka ehihie na abalị, yana n'ihe gbasara mgbado anya, mkpọtụ na ngalaba ndị ọzọ, ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị na anyị na -akọwapụta na ọ dị mma n'abalị, ọ nwere ụlọ ama ama maka imeziwanye na ngalaba a. Agbanyeghị, enweghị mgbagha na Huawei P50 Pro bụ ọmụmaatụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na foto ya na ekwentị mkpanaka ya dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Nyocha igwefoto nke Huawei P50 Pro, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ [DxOMark Analysis]
Otu esi eji aghụghọ ndị a zoo kọntaktị na WhatsApp
Otu esi enweta SMS na iPad gị ka ọ bụrụ iPhone